सुक्रोज विश्वको चिनी उत्पादनको-65-70०% को हिस्सा हो। उत्पादन प्रक्रियालाई धेरै भाप र बिजुली चाहिन्छ, र यसले उत्पादनको विभिन्न चरणहरूमा धेरै अवशेषहरू उत्पन्न गर्दछ मा उही समय.
विश्वमा Sucrose उत्पादन स्थिति
संसारभरि एक सय भन्दा बढी देशहरू छन् जुन सुक्रोज उत्पादन गर्दछन्। ब्राजिल, भारत, थाईल्यान्ड र अष्ट्रेलिया विश्वको प्रमुख उत्पादक र चिनी निर्यातकर्ता हुन्। यी देशहरूले उत्पादन गरेको चिनी उत्पादन विश्वव्यापी उत्पादनको लगभग% 46% छ र चिनी निर्यातको कुल मात्रा विश्वव्यापी निर्यातको करीव %०% हो। ब्राजिलियन चिनी उत्पादन र निर्यात मात्रा विश्वमा पहिलो स्थानमा, सुक्रोज वार्षिक कुल विश्वव्यापी उत्पादनको २२% र कुल विश्वव्यापी निर्यातको %०%।
चिनी / गन्ना उप-उत्पादहरु र संयोजन
उखु प्रशोधन प्रक्रियामा, सेतो चिनी र खैरो चिनी जस्ता मुख्य उत्पादनहरू बाहेक, त्यहाँ main मुख्य उप-उत्पादनहरू छन्: गन्ना ब्यागसे, प्रेस माड, र ब्ल्याकस्ट्र्याप गुड.
बगसे उखुको जुसो निकालेपछि उखुबाट रेशेस अवशेष हुन्। उखु बगसी जैविक मलको उत्पादनका लागि धेरै राम्रोसँग प्रयोग गर्न सकिन्छ। यद्यपि बगसेस लगभग शुद्ध सेल्युलोज हो र यसले कुनै पौष्टिक तत्त्व समावेश गर्दैन किनकि यो एक व्यावहारिक मल होइन, अन्य पौष्टिक तत्त्वहरूको थप आवश्यक छ, विशेष गरी नाइट्रोजन समृद्ध पदार्थ, जस्तै हरियो सामग्री, गोबर, सुँगुर इत्यादि। विघटित
◇चिनी मिल प्रेस मड:
चिनी उत्पादन, जुन चिनी उत्पादनको प्रमुख अवशेष हुन्, गन्धको रसको पसीने प्रक्रियाबाट छानिएको गाँठको भारको २% ओगटेको छ। यसलाई गन्ने फिल्टर प्रेस माटो, उखु प्रेस माटो, गन्ना फिल्टर केक माटो, गन्ने फिल्टर केक, गन्ना फिल्टर माटो पनि भनिन्छ।
फिल्टर केक (हिलो) ले महत्त्वपूर्ण प्रदूषण निम्त्याउँछ, र धेरै चिनी कारखानाहरूमा यसलाई फोहर मानिन्छ, जसले व्यवस्थापन र अन्तिम निपटानको समस्या खडा गर्दछ। यो हावा र भूमिगत पानी प्रदूषण गर्दछ यदि अनियमित मा फिल्टर माटो पिलिंग। त्यसैले चिनी रिफाइनरी र वातावरणीय संरक्षण विभागहरूको लागि प्रेस माटोको उपचार जरुरी समस्या हो।
फिल्टर प्रेस माटोको अनुप्रयोग
वास्तवमा, जैविक पदार्थ र खनिज तत्त्वहरूको पर्याप्त मात्रामा बोटबिरुवा पोषणको लागि आवश्यक भएकोले, फिल्टर केक ब्राजिल, भारत, अष्ट्रेलिया, क्युबा, पाकिस्तान, ताइवान, दक्षिण अफ्रिका र अर्जेन्टिनालगायत धेरै देशहरूमा मलको रूपमा प्रयोग भैसकेको छ। यो उखु खेतीमा र अन्य बालीहरूको खेतीमा खनिज मलको पूर्ण वा आंशिक विकल्पको रूपमा प्रयोग गरिएको छ।
कम्पोस्टर मलको रूपमा फिल्टर प्रेस मडको मान
चिनी उत्पादन र फिल्टर माटो (पानी सामग्री 65 65%) को अनुपात १०:3हो, भन्नुको मतलब १० टन चिनी उत्पादनले १ टन सुक्खा फिल्टर माटो उत्पादन गर्न सक्छ। २०१ 2015 मा, विश्वमा चिनीको कुल उत्पादन १.7272२ अरब टन छ, ब्राजिल, भारत र चीनले विश्वको of 75% को प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो अनुमान गरिएको छ कि भारतमा प्रत्येक बर्ष लगभग .2.२ मिलियन टन प्रेस माटो उत्पादन गरिन्छ।
कसरी वातावरण मैत्री फिल्टर प्रेस कीच वा प्रेस केक प्रेस गर्नुहोस् भनेर जान्नु अघि, यसको रचनाको बारेमा थप हेरौं ताकि एक सम्भाव्य समाधान छिट्टै फेला पार्न सकौं!
उखु प्रेस माटोको भौतिक गुणहरू र रासायनिक संरचना:
कुल अस्थिर ठोस
BOD (२ days डिग्री सेल्सियस मा days दिन)
मैन र फ्याट्स
माथिबाट हेर्दै, प्रेस माडले जैविक र खनिज पोषकतत्वहरूको ठूलो मात्रा समावेश गर्दछ, जैविक कार्बनको २०-२5% बाहेक। प्रेस माटोमा पनि पोटेशियम, सोडियम र फास्फोरस हुन्छ। यो फास्फोरस र जैविक पदार्थको समृद्ध स्रोत हो र यसको ठूलो ओस छ, जसले यसलाई मूल्यवान कम्पोस्ट मल बनाउँछ! एक सामान्य उपयोग मलको लागि हो, दुबै असीमित र प्रसोधन गरिएको फारममा। प्रक्रियाहरू यसको मल मूल्य सुधार गर्न प्रयोग गरियो
कम्पोस्टिंग, सूक्ष्मजीवहरूसँगको उपचार र डिस्टिलरी बर्षाहरूसँग मिक्स समावेश
चक्र भनेको चिनी क्रिस्टलको केन्द्रापसारको समयमा 'C' ग्रेड चिनीबाट अलग गरिएको उप-उत्पाद हो। प्रति टन उखुको उत्पादन4देखि 4.5.%% को दायरामा हुन्छ। यो कारखानाबाट फोहोर उत्पादनको रूपमा पठाइन्छ।
यद्यपि, गुड दाँत कम्पोस्ट ढेर वा माटोमा विभिन्न प्रकारका माइक्रोबहरू र माटो जीवनको लागि उर्जाको राम्रो, द्रुत स्रोत हो। मोलेसमा नाइट्रोजन रासनमा २ 27: १ कार्बन छ र यसमा २१% घुलनशील कार्बन हुन्छ। यो कहिलेकाँही पकाउने वा इथानोल उत्पादनको लागि प्रयोग गरिन्छ, गाईवस्तुको आहारको एक घटकको रूपमा, र "गुड़-आधारित" मलको रूपमा।
चश्माहरूमा पोषक तत्त्वहरूको प्रतिशत
ग्लूकोज र फ्रक्टोज
क्याल्सियम र पोटेशियम
फिल्टर प्रेस मड र चश्मा कम्पोस्ट मल उर्वरक प्रक्रिया
पहिले चिनी प्रेस माटो (.8 87.%%), कार्बन सामग्री (.5 ..5%) जस्तै घाँस पाउडर, पराल पाउडर, जीवाणु कोकर, गहुँको कोलो, भुस, चरा आदि। गुड (०.%%), एकल सुपर फास्फेट (२.०%), सल्फर माटो (०.२%) राम्रोसँग मिसाईएको थियो र जमिन सतहभन्दा माथि २० मिटर लम्बाई, २.3-२.m मीटर चौंडाई र अर्धवृत्त आकारमा ircle..6 मिटर अग्लो बनाइएको थियो। (सुझावहरू: विन्ड्रोजको उचाईको चौडाई अनुरूप हुनुपर्दछ। कम्पोस्ट टर्नरको प्यारामिटर डाटा जुन तपाईं प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ)
यी पाइल्सलाई मिश्रित हुन र पाचन प्रक्रिया पूरा गर्न लगभग १-2-२१ दिनको लागि समय दिइयो। पिलिंगको क्रममा, मिश्रण mixed०-60०% को ओस कायम राख्न प्रत्येक तीन दिन पछि, मिश्रण मिश्रित थियो, पल्टियो र पानी पढाईयो। कम्पोस्ट टर्नर एकरूपता राख्न र राम्रोसँग मिक्स गर्न प्रक्रिया मोडको लागि प्रयोग गरियो। (सुझावहरू: कम्पोस्ट विन्ड्रो टर्नरले मल उत्पादकलाई मिक्स र कम्पोस्ट द्रुत रूपमा फेर्न मद्दत गर्दछ, जैविक मल उत्पादन लाइनमा सक्षम र आवश्यक हुदै)
यदि ओसिलो मात्रा धेरै छ भने, किण्वन समय बढाइन्छ। हिलोको कम पानी सामग्रीले अपूर्ण रूपमा किण्वनको कारण निम्त्याउँछ। कम्पोस्ट परिपक्व छ कि छैन कसरी निर्णय गर्ने? परिपक्व कम्पोस्ट ढीला आकार, खैरो र color (taupe मा pulverized) र कुनै गन्ध बिना द्वारा विशेषता हो। कम्पोस्ट र वरपरको बीच लगातार तापमान छ। कम्पोस्टको ओसको मात्रा २०% भन्दा कम छ।
फर्मेन्ट सामग्री त्यसपछि पठाइन्छ नयाँ जैविक मल ग्रेन्युलेटर दानाको गठन को लागी।
◇सुकाउने / कूलि
ग्रान्युलहरू लाई पठाइनेछ रोटरी ड्रम सुकाउने मेसिन, यहाँ गुड़ (कुल कच्चा मालको ०.%%) र पानी ड्रायरमा प्रवेश गर्नु अघि पानीको स्प्रे गर्नु पर्छ। एक रोटरी ड्रम ड्रायर, सुक्खा ग्रान्युलहरुमा शारीरिक टेक्नोलोजी अपनाई, २0०-२50०aको तापक्रममा ग्रेन्युलहरू बनाउन र ओसलाई १०% मा कम गर्न प्रयोग गरिन्छ।
कम्पोस्टको दाना पछि, यो पठाइन्छ रोटरी ड्रम स्क्रीन मशीन। जैविक मलको औसत आकार किसान र सहज गुणस्तरको धान्य सजिलो बनाउन mm मिमी व्यासको हुनुपर्छ। ओभरसाइज र अण्डरसाइज ग्र्यानुल्सहरू पुन: पुन: पुन: साइज गरिन्छ ग्रेनुलेसन एकाईमा।
आवश्यक आकार को उत्पादन पठाइन्छ स्वचालित प्याकेजि machine मेशीन, जहाँ यो ब्यागमा स्वत: भरिने मार्फत प्याक गरिएको छ। र अन्तमा उत्पाद बिक्रीको लागि विभिन्न क्षेत्रमा पठाइन्छ।
चिनी फिल्टर माटो र चश्मा कम्पोस्ट उर्वर सुविधाहरू
१. उच्च रोग प्रतिरोध र कम झार:
चिनी फिल्टर माटोको उपचारको अवधिमा सूक्ष्मजीवहरूले द्रुत गतिमा गुणन गर्दछन् र ठूलो मात्रामा एन्टिबायोटिक, हर्मोन र अन्य विशिष्ट मेटाबोलिटहरू उत्पादन गर्दछन्। माटोमा मल प्रयोग गर्नाले यसले रोगजनक र झारपातको वृद्धिलाई प्रभावकारी रूपमा रोक्न सक्छ, कीरा र रोग प्रतिरोध क्षमतामा सुधार ल्याउँछ। कुनै उपचार बिनाको भिजेको फिल्टर माटो ब्याक्टेरियाहरू, झारका बीउहरू र अण्डाहरू बालीमा पार गर्न सजिलो छ र तिनीहरूको बृद्धिलाई असर गर्दछ)।
२. उच्च उर्वर दक्षता:
किण्वन अवधि केवल -15-१-15 दिनहरू मात्र भएकोले, यो फिल्टर माटो पोषक तत्वहरू सकेसम्म सम्हालिन्छ। सूक्ष्मजीवहरूको विघटनको कारण, यसले प्रभावकारी पोषक तत्वहरूमा समाहित गर्न गाह्रो सामग्रीलाई रूपान्तरण गर्दछ। चिनी फिल्टर माटोको जैव जैविक मल मलको दक्षतामा चाँडो खेल्न सक्छ र बालीहरूको विकासको लागि आवश्यक पोषकहरूको भरपाई गर्न सक्छ। तसर्थ, मल क्षमता एक लामो समय मा राख्छ।
Soil. माटोको उर्वरता माटो र माटोको सुधार:
एकल रासायनिक मल लामो अवधिका लागि प्रयोग गर्दै माटो जैविक पदार्थ बिस्तारै खपत हुन्छ, जसले लाभदायक माटो माइक्रोबियल घटाउने संख्याको परिणाम दिन्छ। यस तरीकाले, एन्जाइम सामग्री कम हुन्छ र कोलोइडल बिग्रन्छ, माटो कम्पेक्शन, अम्लीकरण र सालिनेसनको कारण। फिल्टर माटो जैविक मलले बालुवा, छाडा माटोलाई पुनर्मिलन गर्न सक्दछ, रोगजनकहरू रोक्न सक्छन्, माटोको माइक्रो-इकोलॉजिकल वातावरण पुनर्स्थापना गर्न सक्दछ, माटोको पारगम्यता बढाउन र पानी र पोषक तत्वहरूलाई समाहित गर्ने क्षमता सुधार गर्न सक्दछ।
Crop. बाली उत्पादन र गुणस्तर सुधार गर्ने:
जैविक मल प्रयोग गरेपछि, बालीहरूको विकसित जरा प्रणाली र कडा पात पात हुन्छ, जसले बालीहरूको अंकुरण, वृद्धि, फूल फुल्ने, फलफूल र परिपक्वतालाई बढावा दिन्छ। यसले कृषि उत्पादनको उपस्थिति र रंगमा उल्लेखनीय सुधार गर्दछ, उखु र फलफूलको मात्रा बढाउँदछ। फिल्टर माटो जैव जैविक मल बेसल सामान्य र शीर्ष ड्रेसिंगको रूपमा प्रयोग गर्दछ। बढ्दो मौसममा अकार्बनिक मलको एक सानो मात्रा लागू गर्नुहोस्। यसले बाली वृद्धिको आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्छ र जग्गा प्रबन्धन र प्रयोग गर्न उद्देश्यमा पुग्न सक्छ।
Agriculture. कृषिमा व्यापक प्रयोग
आधार उर्वरको रूपमा प्रयोग गर्दै र उखु, केरा, फलफूल, खरबूज, तरकारी, चिया बोट, फूल, आलु, सुर्ती, चारा, आदि।